को’रोनाले छोराको मृ’त्यु भएपछि रातभर रुँदै बसे परिवार, बिहान छोरा जिउँदै ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/को’रोनाले छोराको मृ’त्यु भएपछि रातभर रुँदै बसे परिवार, बिहान छोरा जिउँदै !
एजेन्सी। को’रोनाभा’इरसका कारण छोराको मृ’त्यु भएको खबर पाएपछि परिवार शोकमग्न भयो । बेलुकीपख खबर आएको थियो । रातभर परिवार रुँदै बसे । बिहान जब उनीहरु छोराको श’व हेरे त्यसपछि बल्ल थाहा भयो उनीहरुका छोराको त मृ’त्यु भएकै थिएन । स्वास्थ्य विभाग र सुरक्षाकर्मीको लाप’रवाहीका कारण यस्तो घ’टना भएको पाइएको छ । घटना उत्तर प्रदेशको संत कबीर नगर जिल्लाको भएको इण्डिया टुडेले लेखेको छ
घटना विवरणअनुसार एक पितालाई पुलिसले फोन गरेर उनका छोराको को’रोनाभा’इरसका कारण मृ’त्यु भएको जानकारी दिएको थियो । सूचना पनि परिवार शव लिन गए । केही बेरमै श’व सील प्याक गरेर परिवा’रलाई दिइयो । रातभर परिवार र गाउँलेहरु शो’क’मग्न रहे । बिहान पिता आफ्ना अर्का छोराको साथमा घाटमा गए । श’व जलाउनुभन्दा पहिले पिताले मृ’तकको अनुहार हेरे त्यसपछि भने पिता र पुलिसको होस उ’ड्यो ।
मृ’तक ती पिताका छोरा थिएनन् । त्यो शव अर्कै बिरामीको थियो । को’रोना सं’क्रमितको श’व भएको कारणले शवको अन्तिम सं’स्कारको लागि त्यही किसिमको सुरक्षा उपायसहित व्यवस्था गरिएको थियो । शवलाई अग्नी दिने बेला पितालाई मृ’तकको शरीर देखेपछि केही शं’का भयो । उनले श’वको अनुहार हेरेपछि भने मृ’तक उनका छोरा नभएको पुष्टि भयो। श’व अर्कै युवकको थियो जो केही समय पहिले मात्र मुम्बइबाट फर्केका थिए र उनी सं’क्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । दुवै युवकको एउटै अस्पतालमा उपचार भ’इरहेको थियो र दुईको बेड नजिकै थियो ।